I-Cedar Grove Cottage - I-Airbnb
I-Cedar Grove Cottage
Roberts Creek, British Columbia, i-Canada
Indlu encane ibungazwe ngu-Jane
Phakathi kwezinkomo ezinkulu engadini yomdwebi futhi uhhafu nje wesikhala esivela e-Ocean, i-Cedar Grove Cottage iyindawo enhle yezithandani nokuvuselela. Indlwana yindlu encane enhle eyakhiwe yingcweti yase-Tibetan, enombhede we-loft, usofa ovulekayo, nekhishi elincane, umpheme wangasese, i-BBQ, ikhawunta yangaphandle nosinki, neshawa yangaphandle. Iphosti esanda kufakwa nendlu yokugezela enomusi inobhavu wezinyawo we-claw, okokushisisa phansi kanye ne-shower enkulu. Inethezeke kakhulu kubantu abadala ababili.
I-Cedar Grove Cottage yabelana ngendawo nenye yamapulazi ase-Roberts Creek yasekuqaleni futhi yakhelwe futhi yakhiwa ngumdwebi wase-Tibet. Nakuba incane futhi ifanelekela kangcono abantu abadala abangashadile noma ababili, iza nombhede omkhulu we-loft nosofa omkhulu ontofontofo wesitudiyo. Izikhungo zokupheka zihlanganisa indawo yokuhlala yangaphandle neyangaphakathi ne-bbq nesici, i-toaster oven, i-French press, isiqandisi esincane nosinki wekhishi langaphandle.
Indlu yokugezela ehlukile, esanda kufakwa omunye wabakhi abahamba phambili be-Coast Coast, ine-shower, ubhavu onemilenze kanye nephansi lesamente elifudumele elizovulelwa ukuhlala kwakho ezinyangeni ezipholile. Iminyango yase-France iholela kuvulande. Amanzi ashisayo amasha ohlelweni lokufunwa afakiwe ngo-March 2021 futhi manje ubhavu wensimbi wakudala omuhle ungagcwala ngamanzi ashisayo aphumayo.
Indlwana yindawo enhle yangaphakathi/yangaphandle, noma "i-glamping enhle". I-patio ivikelekile kodwa ungahle uzwe imvula yehla ohambweni olufushane kakhulu oluya endlini yokugezela. Okuhlangenwe nakho kokugeza izitsha zangaphandle ngosuku olunomoya, olunezimvula noma ishawa elishisayo ngaphansi kwama-cedars eqhweni akufanele uphuthelwe.
4.86 · 158 okushiwo abanye
I-Cedar Grove Cottage iphakathi nebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo kwamanye amabhishi aziwa kakhulu e-Robert 's Creek. Indlwana iphinde ibe yibanga elihanjwa ngezinyawo ukuya endaweni yokudlela edumile ye-Gumboot, i-Cafe nesitolo esivamile. Izitolo eziningana ezikhethekile, isitolo sokudla okungokwemvelo kanye nesitudiyo se-yoga esaziwa kahle ngamanye amasevisi ambalwa "i-The Creek" enawo.
Umbungazi u-Jane Hennessy uhlala endaweni futhi uyatholakala ngezidingo zakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Roberts Creek namaphethelo